अब २५.५ लाखमै फक्सवागनको पोलो १.०
नजिकिदै गरेको नेपालीहरूको महान चाड दशैंतिहारको शुभ अवसरमा कम्पनीले गाडीको मुल्यमा विशेष छुटको व्यवस्था समेत गरेको बताएको छ । जस अनुसार गाडी बुक गर्ने प्रथम सय ग्राहकले २५ लाख ५० हजारमा गाडी पाउने छन् ।
भाद्र २४, काठमाडौं । फक्सवागनको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता पुजा इन्टरनेशनल नेपाल प्रा.लि.ले फाक्सवागनको नयाँ मोडलको गाडी पोलो १.० नेपाली बजारमा भित्राएको छ । आज कम्पनीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैं उक्त गाडी सार्वजनिक गरेको हो । ९९९ सीसी र ७६ एजपी इन्जिन क्षमता रहेको उक्त गाडी इन्धन बचतमा कोशेढुंगा बन्ने कम्पनीको दावी छ ।
यसअघि नेपाली बजारमा फक्सवागन पोलो गाडी १६०० र १२०० सीसीमा उपलब्ध थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार एक हजार (१०००) सीसी भन्दा माथिका गाडीमा कर वृद्धि गरिएको भए पनि यो नयाँ मोडलको गाडि खरिदले उपभोक्तालाई उक्त कर वृद्धिले कुनै असर नपार्ने कम्पनीको दावी छ ।
नयाँ पोलोको बजार मुल्य २६ लाख पन्चानब्बे हजार (२६,९५,०००) रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
नजिकिदै गरेको नेपालीहरूको महान चाड दशैंतिहारको शुभ अवसरमा कम्पनीले गाडीको मुल्यमा विशेष छुटको व्यवस्था समेत गरेको बताएको छ । जस अनुसार गाडी बुक गर्ने प्रथम सय ग्राहकले २५ लाख ५० हजारमा गाडी पाउने छन् । विशेष छुट सहितको उक्त मोडलको गाडीमा सुरक्षाका विभिन्न व्यवस्था जस्तै एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम (एबीएस), एयर ब्याग, गाल्भनाइज्ड बडि, पावर विन्डो, रियर भ्यू क्यामेरा, पोलन फिल्टर सहितको एयर कन्डिसन, पावर स्टरिङ आदि समावेश रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ ।
सन् २०११ मा नेपालको बजारमा ल्याएको पोलो १.६ ह्याचब्याक गाडी अत्याधिक सफल र दोस्रो बजारमा पनि सबै भन्दा बढी मुल्य पाउने गाडी रहेको कम्पनीको दावी छ ।
पोलो १.० ले पनि उपभोक्ताहरूबाट उस्तै माया र सद्भाव पाउने कम्पनीले आशा राखेको छ । फक्सवागन पोलो नियमित मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्चको हिसाबमा सबैभन्दा कम खर्चिलो गाडी रहेको स्वतन्त्र सर्भे सँस्था ईलम कन्सल्टेन्सीले प्रमाणित गरेको कम्पनिले जानकारी दिइएको छ । अध्ययनले फक्सवागन पोलो गाडी अन्य ब्राण्डका सोहि समूहका गाडी भन्दा ३० प्रतिशत कम खर्च पर्ने देखाएको छ । अन्य ब्राण्डका गाडीहरु ५,००० कि.मी. मा सर्भिसिङ गनुपर्ने भएपनि फक्सवागन पोलो गाडी १५ हजार कि.मी. सम्म निर्धक्क चलाउन सकिने कम्पनीको भनाई छ ।
कार्यक्रममा पुजा इन्टरनेशनल प्रा.लि. का कार्यकारी अधिकृत विबेक विजुक्छेले अन्तर्राष्ट्रिय गाडीकोे व्यापारमा पछिल्ला दुई वर्षमा फक्सवागन अग्रपंक्तिमा रहेको बताए ।
कम्पनीले सन् २०१७ मा मात्रै १,०४,१३,३१५ गाडी विक्रि गरेको तथ्यांकले पनि यस कुराको पुष्टि गर्ने विजुक्छेको दावी थियो ।
फक्सवागनको नेपालमा हाल ९ वटा सर्भिस स्टेशन रहेकोमा ३ वटा काठमाडौंमा नै रहेको कम्पनिले जानकारी दिएको छ ।